सन्दीप र सुशनले बनाए अमेरिकाको हरि विजोग, रचे कृतिमान !
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक शृंखलामा नेपाल अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले फिल्डिङ राजेपछि अमेरिका ब्याटिङ गरेको थियो । नेपालले जितका लागि ३६ रनको लक्ष्य पाएको छ । नेपालका लागि लेग स्पीनर सन्दीप र सुशन भारी चम्किएपछि अमेरिका
नेपालको सानदार कीर्तिमानी जित अमेरिकामाथि !
नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग २ त्रिकोणात्मक एकदिवसिय सिरिज अन्तर्गत बुधबार अन्तिम खेलमा अमेरिकालाई ८ विकेटले हराएको छ । अमेरिकाले प्रस्तुत गरेको ३६ रनको विजयी लक्ष्य नेपालले ५.२ ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै पुरा गरेको हो । नेपालका दीपेन्द्र सिंह ऐरी ११ बलमा २ चौका र १ छक्का सहित १५ रनमा अविजित
नेपालका लागि लेग स्पीनर सन्दीप र सुशन चम्किएपछि अमेरिका को भयो हरिबिजोग राखे वल्ड रेक्ट !
आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज आज सकिँदैछ । नेपाल अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले फिल्डिङ राजेपछि अमेरिका अहिले ब्याटिङ गरेको थियो । नेपालले जितका लागि ३६ रनको लक्ष्य पाएको छ । नेपालका लागि लेग स्पीनर सन्दीप
नेपाल रच्यो विश्व कीर्तिमान ! सन्दीपको यो करिअरकै उच्च प्रर्दशन
नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग २ त्रिकोणात्मक एकदिवसिय सिरिज अन्तर्गत बुधबार अन्तिम खेलमा अमेरिकालाई ३५ ओभरमा अल आउट गर्दै विश्व कीर्तिमान रचेको छ । टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको अमेरिकाले ओभरमा १२ ओभरमा अल आउट हुँदै ३५ रनमा समेटियो । यो ओडीआईको सर्वाधिक कम योगफल हो । यस अघि सन् २००४
सन्दीप लामिछाने र सुशन भारीले घातक बलिङ अमेरिका ३५ रनमा अलआउट !
के घरेलु मैदानमा सुखद अन्त्यको खोजीमा नेपाल पाउलात सफलता ?
आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग दुई अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिज आज सकिँदैछ । सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपाल र अमेरिका भिड्दैछन् । नेपाल घरेलु मैदानमा सुखद अन्त्यको खोजीमा छ । जुनसकै खेलमा पनि दर्शकको स्थान महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालका क्रिकेट प्रशंसक विश्वमै परिचित छन् । अन्य देशका क्रिकेट खेलाडी यहाँका दर्शकबाट निकै प्रभावित
विमलले लिगको अन्तिम खेल खेल्ने सहिद स्मारक ए डिभिजन !
निलम्बन फुकुवा लगत्तै फरवार्ड विमल घर्ती मगरलाई कतार एयरवेज सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको अन्तिम खेल खेल्दै गरेको देख्न पाइने सम्भावना बढेको छ । लिगको उपाधि दौडमा रहेको सानमिगेल मछिन्द्र क्लबले उनलाई आर्मीविरुद्ध शनिबार हुने अन्तिम खेलमा उतार्ने तयारी गरिरहेको छ । विमल मछिन्द्रबाट खेल्नका लागि भने माल्दिभ्सको क्लबबाट इन्टरनेसल
खुसि खबर: अमेरिकामाथि नेपालको शानदार जित !
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक शृंखलामा नेपालले अमेरिकाविरुद्ध जित दर्ता गरेको छ। शनिबार त्रिवि क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुरमा भएको खेलमा पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले अमेरिकाविरुद्ध ३५ रनको जित निकालेको हो। अमेरिकाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले ४९ दशमलव दुई ओभर खेल्दै १९० रन बनाएको थियो। १९१ रनको
सगरमाथाको उचाई बराबर क्रिकेट रंगशालालाई सहयोग गर्ने सन्दीपको घोषणा !
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले प्रति विकेट सगरमाथाको उचाई बराबर क्रिकेट रंगशालालाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिका र ओमानविरुद्धको खेलमा आफूले लिने हरेक विकेट बराबर चितवनमा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई ८,८४८ रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषाणा गरेका हुन्। सन्दीपले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा
सावित्रा एक्लैले गरिन पाँच गाेल : भारत सात – शून्यले पराजित !
भारतमा जारी महिला लिग फुटबल अन्तर्गत नेपाली खेलाडी सावित्रा भण्डारी सहभागी क्लब गोकुलम केरलाले फराकिलो जित दर्ता गरेको छ । शनिबार भएको खेलमा सावित्राको ५ गोलको मद्दतले गोकुलमले उडिसा पुलिसलाई ७–० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । यस्तै एग्बो एसपिरियन र ग्रेस लालहुनरले एक एक गोल थपेका थिए । यस